﻿ ​तपाईलाई नियमित महिनावारी हुँदैन ? यसो गर्नुहोस्
​तपाईलाई नियमित महिनावारी हुँदैन ? यसो गर्नुहोस्
कमजोरि वा अन्य कारणले गर्दा महिनावारी समयमा नहुन सक्छ । महिनावारी समयमा नभए विभिन्न प्रकारका रोगहरुको बिकास हुने चिकित्सक बताउँछन् । तपाई आफ्नो महिनावारी नियमित नभए यी घरेलु उपाए अपनाएर नियमित बनाउन सक्नुहुनेछ ।
राति सुत्नु पूर्व एक गिलास दुधमा दुई चम्चा मिश्रि राखेर भाडामा उमाल्नुहोस् । दुध उम्लेपछि बाहिर निकाल्नुहोस् । दुध चिसो भए पछि पिउनुहोस् । यसरी तपाईले ४ देखि ५ दिन सम्म नियमित दुध पिए तपाईको रोकिएको महिनावारी सुरु हुनेछ ।
साथै राति किसमिस, बदामलाई पानिमा भिजाउनुहोस् । बिहान उठेपछि भिजेको किसमिस र बदामलाई मिश्रिसँग पस्नुहोस् । पिसिएको किसमिस र बदामलाई मह मिसाएर खानुहोस् । यसो गर्नाले तपाईको कमजोरीपन हट्नेछ र तपाईको शरिर तन्दुरुस्त हुनेछ ।